ဇနီးဖြစ်သူကို မငွေသိမ်းလို့သွားစမိလို့ နာမည်အသစ်အပေးခံခဲ့ရတဲ့ ခင်လှိုင် – Cele Zone
ဇနီးဖြစ်သူကို မငွေသိမ်းလို့သွားစမိလို့ နာမည်အသစ်အပေးခံခဲ့ရတဲ့ ခင်လှိုင်
ဟာသဇာတ်ရုပ်တွေကို ပီပီပြင်ပြင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ခင်လှိုင်ဟာ လက်ရှိမှာဆိုရင် အရမ်းကိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုကမ္ဘာလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ထူးချွန်တဲ့ဝါရင့် သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်တစ်ယောက်တင်သာမကဘဲ ဇာတ်သဘင်ဘက်မှာလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုတွေကိုတစ်ခဲနက်ရရှိထားတဲ့ လူရွှင်တော်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် အခုနောက်ပိုင်းတွေမှာသူဟာ အောင်မြင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အဖြစ်လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့၀န်းရံအားပေးခြင်းကိုလည်း ရရှိထားပြန်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တည်မြဲတဲ့ချစ်ခြင်းတွေနဲ့ပုံဖော်ထားပြီးပျော်ရွှင်မှုအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ ခင်လှိုင်ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးလေးကိုတော့ ပရိသတ်တွေအမြဲတမ်းအားကျလို့နေခဲ့ရပါတယ်။ အခုအချိန်ထိလည်း လူငယ်စုံ‌တွဲလေးလို မပြောင်းလဲတဲ့ အချစ်တွေနဲ့မို့ ပြဿနာကြီးကြီးမားမားဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘဲ အပေးအယူမျှမျှနဲ့ အိမ်ထောင်ရေးလေးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းမှာတော့ ခင်လှိုင်ဟာ မိသားစုနဲ့အတူ ချောင်းသာကမ်းခြေကို အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ရောက်ရှိ‌လို့နေခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။
အခုလည်း ကမ်းခြေက ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးရဲ့ အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေကို တင်ရင်းနဲ့ ချစ်ဇနီးလေးကို စနောက်လိုက်ရာကနေ ဇနီးဖြစ်သူပြန်ခေါ်လိုက်နဲ့နာမည်ပြောင်လေးကြောင့် အသည်းယားပြီးအချစ်ပိုခဲ့ရတဲ့အကြောင်း ပရိသတ်တွေကိုပြောပြခဲ့တာပါ။ ” ကိုယ်ကသူ့ကိုချစ်စနိုးနဲ့ မငွေသိမ်းလို့ခေါ်လိုက်တာ….သူကပြန်ခေါ်တယ်… ကိုဗိုက်သိမ်းတဲ့ ” ဆိုပြီးတော့ ကြည်နူးဖွယ်ရာလေးပြန်ပြောပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ… အရမ်းကိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ခင်လှိုင်တို့ဇနီးမောင်နံနှစ်ယောက် ရတုတွေအဆက်ဆက်တိုင်တဲ့အထိပေါင်း‌ဖက်နိုင်ကြပြီး အတူတူအိုမင်းနိုင်ကြပါစေလို့ ပရိသတ်တွေနဲ့ထပ်တူ ဆန္ဒပြုဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်….
ဇနီးျဖစ္သူကို မေငြသိမ္းလို႔သြားစမိလို႔ နာမည္အသစ္အေပးခံခဲ့ရတဲ့ ခင္လႈိင္
ဟာသဇာတ္႐ုပ္ေတြကို ပီပီျပင္ျပင္သ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ခင္လႈိင္ဟာ လက္ရွိမွာဆိုရင္ အရမ္းကိုေပ်ာ္႐ႊင္စရာေကာင္းတဲ့ မိသားစုကမာၻေလးကိုပိုင္ဆိုင္ထားခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ထူးခြၽန္တဲ့ဝါရင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ေယာက္တစ္ေယာက္တင္သာမကဘဲ ဇာတ္သဘင္ဘက္မွာလည္း ပရိသတ္ေတြရဲ႕အားေပးမႈေတြကိုတစ္ခဲနက္ရရွိထားတဲ့ လူ႐ႊင္ေတာ္တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါေသးတယ္။ ဒါ့အျပင္ အခုေနာက္ပိုင္းေတြမွာသူဟာ ေအာင္ျမင္တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္တာတစ္ေယာက္အျဖစ္လည္း ပရိသတ္ေတြရဲ႕၀န္းရံအားေပးျခင္းကိုလည္း ရရွိထားျပန္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ တည္ၿမဲတဲ့ခ်စ္ျခင္းေတြနဲ႔ပုံေဖာ္ထားၿပီးေပ်ာ္႐ႊင္မႈအေပါင္းနဲ႔ျပည့္စုံတဲ့ ခင္လႈိင္ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးေလးကိုေတာ့ ပရိသတ္ေတြအၿမဲတမ္းအားက်လို႔ေနခဲ့ရပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ထိလည္း လူငယ္စုံ‌တြဲေလးလို မေျပာင္းလဲတဲ့ အခ်စ္ေတြနဲ႔မို႔ ျပႆနာႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္တယ္ဆိုတာမ်ိဳးမရွိဘဲ အေပးအယူမွ်မွ်နဲ႔ အိမ္ေထာင္ေရးေလးတစ္ခုကိုတည္ေဆာက္ထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီရက္ပိုင္းမွာေတာ့ ခင္လႈိင္ဟာ မိသားစုနဲ႔အတူ ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခကို အလုပ္တစ္ဖက္နဲ႔ေရာက္ရွိ‌လို႔ေနခဲ့တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။
အခုလည္း ကမ္းေျခက ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးရဲ႕ အမွတ္တရပုံရိပ္ေလးေတြကို တင္ရင္းနဲ႔ ခ်စ္ဇနီးေလးကို စေနာက္လိုက္ရာကေန ဇနီးျဖစ္သူျပန္ေခၚလိုက္နဲ႔နာမည္ေျပာင္ေလးေၾကာင့္ အသည္းယားၿပီးအခ်စ္ပိုခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္း ပရိသတ္ေတြကိုေျပာျပခဲ့တာပါ။ ” ကိုယ္ကသူ႔ကိုခ်စ္စႏိုးနဲ႔ မေငြသိမ္းလို႔ေခၚလိုက္တာ….သူကျပန္ေခၚတယ္… ကိုဗိုက္သိမ္းတဲ့ ” ဆိုၿပီးေတာ့ ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာေလးျပန္ေျပာျပခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကဲ… အရမ္းကိုခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ ခင္လႈိင္တို႔ဇနီးေမာင္နံႏွစ္ေယာက္ ရတုေတြအဆက္ဆက္တိုင္တဲ့အထိေပါင္း‌ဖက္ႏိုင္ၾကၿပီး အတူတူအိုမင္းႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ပရိသတ္ေတြနဲ႔ထပ္တူ ဆႏၵျပဳဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္….
ဟော်လန်နိုင်ငံသားတွေက ရုပ်ရှင်ရုံထိသွားကြည့်မယ်လို့ပြောလာတဲ့ ဦးကျော်သူရိုက်ကူးတဲ့ ၁၀၁၄ ရုပ်ရှင်ကားကြီး
မွေးနေ့ရှင်ခင်သဇင်ကို မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကျအောင်ထိ Surprise လုပ်ပေးခဲ့ကြတဲ့ Now & Ever အဖွဲ့သားတွေ
ဗိုလ်ကြီးဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စိတ်‌ကောက်နေတဲ့ ချစ်ခင်ပွန်းကို အပျော့ဆွဲလေးနဲ့ ချော့လိုက်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
အဆော့လွန်ပြီး စပရိန်လေးတွေ တစ်ကိုယ်လုံးပတ်မိကာ ဖြုတ်မရဖြစ်နေတဲ့ ဘေဘီlvyလေးရဲ့ ဗီဒီယို